1.ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် Victor pellet machine ဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့အတွက်အလွန်ထိရောက်သောကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုထည့်သွင်း.
2.ဤသည် 400-600kg / h သေးငယ်တဲ့ကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်စက်ရုံအမျိုးမျိုးသောကြက်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်သက်ဆိုင်သည်, ကြက်သားကဲ့သို့ကြက်၊ ဘဲအတွက်အစာတောင့်များကိုအစာကျွေးစက်ရုံသို့မဟုတ်အိမ်တွင်အသုံးပြုသည်, ဘဲ, ကိုရီးယား, ငုံး ,ဒါပေမယ့်လည်းတိရစ္ဆာန်များအပါအဝင်မွေးမြူရေး, နွားမ, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့.
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အတွက်အလွန်ထိရောက်သောကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်အပင်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတပ်ဆင်သည်. ဤသည် 400-600kg / h သေးငယ်တဲ့ကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်စက်ရုံအမျိုးမျိုးသောကြက်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်သက်ဆိုင်သည်, ကြက်သားကဲ့သို့ကြက်၊ ဘဲအတွက်အစာတောင့်များကိုအစာကျွေးစက်ရုံသို့မဟုတ်အိမ်တွင်အသုံးပြုသည်, ဘဲ, ကိုရီးယား, ငုံး ,ဒါပေမယ့်လည်းတိရစ္ဆာန်များအပါအဝင်မွေးမြူရေး, နွားမ, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့. စက်ရုံကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တင်းကြပ်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်, ကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု.
Feed Grinder ရောစပ်စက်
စီးရီးစပါးကိုနှိပ်စက်နိုင် ,ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်,ဂျုံ,ဆန် ,ပဲ,
တစ်နာရီလျှင် 1t စွမ်းရည်ကြိတ်ခွဲ,
တစ်နာရီလျှင် ၅၀၀ မှ ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်,700~ 800kg / h,1000~ 1500kg / h
လျှောက်လွှာ: အကြီးစားအစာကြိတ်စက်ရုံ / အစာကျွေးစက်ရုံ / စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ; စံပြ ကြိတ်ခွဲစက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသောအလိုအလျောက်အစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုသည်.
အဓိကအင်္ဂါရပ်: ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ / Resonable ယာဉ် / အဆင်ပြေတပ်ဆင် / ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့် / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသည်. ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်လုံးလေးများကိုကျွေးပါ 3000-10000 တစ်နှစ်လျှင် T အမှုန့်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အစာကျွေးသောလေးများ. လုံးလုံးလျားလျား pelletizing ဖြစ်စဉ်ကိုကုန်ကြမ်းလက်ခံရရှိပါဝင်သည်, ကြိတ်ခွဲ, အသုတ်, ခြောက်သွေ့, pelleting နှင့်ထုပ်ပိုးအစာကျွေး. ကြိတ်နေစဉ်, အစာတောင့်များ၏အာဟာရသည်မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ.
ထိုကဲ့သို့သော Alfafa ဟာအဖြစ် ,ဆန်ကောက်ရိုး,ပဲပုပ်, ဂျုံ, ပြောင်းဖူး,
ကြက် / တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပထမ, ပဲပုပ်မုန့်နှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောအစာကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများသို့မဟုတ်အစာကျွေးသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ကြိတ်ခွဲစက်ကို ဖြတ်၍ ကောင်းသောအမှုန့်အဖြစ်ကြေကွဲသွားမည်. ထိုအခါ, အဆိုပါရောစပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၌တည်၏, အမှုန့်ထိုကဲ့သို့သောဗီတာမင်အဖြစ်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူရောနှောနိုင်ပါသည်, microelement, အစာ, အရိုး, ဂျုံနို့မှုန့်စသည်တို့. ရောစပ်ပြီးနောက်, သူတို့ပြီးပြည့်စုံသောအစာကျွေးကွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. ထိုအခါ, အစာကျွေးခြင်းကွက်ကိုတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပြီးအလိုအလျောက်အချင်းနှင့်အရှည်ရှိသောယူနီဖောင်းအလုံးလေးများသို့ထုတ်လွှတ်ပါလိမ့်မည်။. စိစစ်ခြင်းနှင့်အအေးပြီးနောက်, ကြက်အစာတောင့်များကိုတိုက်ရိုက်ထုပ်ပိုးနိုင်သည်.
သေးငယ်တဲ့အစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ Flow ဇယား
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 1, ပြောင်းနှင့်ပဲပုပ်မုန့်ညက် (စတိုးဆိုင် & တိုက်ရိုက်မြေပြင်ပေါ်တွင်အစာကျွေး) ကြိတ်စက်ထဲသို့စုပ်ယူသည် 101 နှင့်ဒဏ်ငွေအမှုန့်သို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ. အခြားအမှုန့် / ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောဂျုံ bran ကိုအဖြစ်, အရိုးမုန့်ညက်, microelement, ဗီတာမင်, စသည်တို့, သောနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, သူတို့ကဒေါင်လိုက်ရောစပ်စက်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ကျွေးနိုင်သည် 201 ၎င်း၏နို့တိုက်ကျွေးရေးဆိပ်ကမ်းကနေ. ပစ္စည်းများအားလုံးကိုတစ်ပုံစံတည်းရောနှောခြင်းနှင့် Screw Conveyor ၏ Hopper သို့ဆေးရုံကဆင်းကြသည် 301 ထို့နောက်ယာယီသိုလှောင်ခြင်း Silo သို့အစာကျွေးပါ 302 ဝက်အူပေါ်ကိုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ. ဝက်အူလမ်းခွဲအားဖြင့် 303, ရောနှောပစ္စည်းများတစ်ပုံစံတည်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်သို့အစာကျွေးနေကြသည် 304 ထို့နောက်အစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများထဲသို့ထုတ်လုပ်သည်. လုံးလေးများသည် Belt Conveyor ၏ Hopper ထဲသို့ဆင်းသွားသည် 401 ထို့နောက် Pellet Cooling Machine သို့အစာကျွေးပါ 403 Air Lock မှတစ်ဆင့် 402. အအေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ, လတ်ဆတ်သော & ပူပြင်းတဲ့အလုံးလေးတွေကိုအအေးပေးတယ်, အဆိုပါလုံးလေးများအပူချိန်အခန်းအပူချိန်ထက်ပို5not မဟုတ်ပါဘူး. အအေးခံတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များကိုတုန်ခါမှုအားဖြင့်စစ်ဆေးသည် 404, ထို့နောက်သူတို့ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်.